Posted by ငွေလမင်း at 6:36 PM
အိမ်ဦးနတ်အတွက် လာဖတ်သွားပါတယ်ရှင်။ ကျေးဇူး။
အိုး...အားလုံးကို ရှုပ်နေတာပဲ.. အတာမစားချင်ဘူးကွယ်... သတ်သတ်လွတ်ဖြစ်အောင် ဘီယာပဲ သောက်ကြတာပေါ့..နော
မမရေ အတာစားခြင်း အကြောင်းလေး သိခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးပါမမ.. မင်္ဂလာရှိသောနှစ်သစ်လေး ဖြစ်ပါစေမမ။
အင်း သယံဇာတ ကတော့ အနုလား၊ အကျက်လားဟင်
အင်း ရွှေဈေးကျမှ ဝယ်တော့မယ်
အင်း အတာစားလိုက်လို့ကုန်သွားတာလား မသိ :D
ရွှဲအောင်ကို ပက်ပြီး ပြေးပြီဗျို့....
အတာ စားရတာလည်း သိပ်တော့ မလွယ်ဘူးဗျ နော့ . . .
ဒါနဲ့ စကားမစပ် . . ဗွမ်း . . ဝုန်း . .